Madaxweyne C/weli Gaas oo dib u soo laba kacleeyey & Dagaal kale oo uu damacsan yahay in uu gobolka Sool ka dhaco hadii uu noqdo….. – Puntlandtimes
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland ee wakhtigiisu sii dhamaanayo isla markaasna kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa si gaar ah uga hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin dagaaladii ka dhacay Puntland Shantii sano ee uu xilka hayey, waxaana uu madaxweyne Gaas sheegay in uu yahay madaxweynihii ugu horeeyey ee u qalab qaata xoreynta gobolka Sool.
Dagaaladii ka dhacay deegaanka Tukaraq ayuu u sheegay in uu qayb ka ahaa hawlgalka dibu xoreynta gobolka Sool ee xukuumaddiisa, waxaana uu sheegay in haatan ay ka go’an tahay dibu xoreynta gobolkaasi.
Dhismaha ciidamada Puntland ayuu si gaar uga hadlay, waxaana xusay in ciidamada uu tayeyn doono isla markaasna ay isku diyaarin doonaan hawlgalo ka dhan kooxaha argagaxisada ah iyo ciidamada Somaliland ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka Sool.
Federaalisimka iyo dhismaha dowladda federaalka Somalia ayuu sheegay in Puntland ay door wacan ka qaadatay, waxaana uu sheegay in hadii uu noqdo mar kale madaxweynaha Puntland uu wax badan oo qabyo ah uu qaban doono.
Arrimaha lagu muransan yahay ee dhinacyada Somaliland iyo Puntland ayuu si gaar ah u abaaray, waxaana uu xusay in goboladda Sool, Sanaag iyo Cayn ay yihiin dhul Puntland ah isla mar ahaan taana ay ka go’an tahay dibu soo celin doonta.
Barnaamijyo horumarineed oo uu Puntland ka hirgeliyey ayuu ka hadlay, waxaana uu shacabka Puntland ku aamanay qaabka ay uga qayb qaateen hirgelinta qorshayaashaasi horumarineed.